Weerar khasaaro geestay oo Caawa ka dhacay Gobolka SH.Hoose | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Weerar khasaaro geestay oo Caawa ka dhacay Gobolka SH.Hoose
Weerar khasaaro geestay oo Caawa ka dhacay Gobolka SH.Hoose
Faahfaahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa weerar khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac in uu ka dhacay wadada xiriirisa degmada Afgooye iyo degmada Walanweyn ee Gobolkaasi Shabeellaha Hoose,.
Dagaalkaan ayaa yimid, kaddib markii Xubno la sheegay inay ka tirsanaayeen Ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen Gaadiid ay la socdeen Ciidamo ka tirsan Dowladda, xilli ay marayeen degaanka Doonka oo u dhaw degmada Afgooye, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal geystay khasaaro kala duwan.
Wararka ayaa intaas ku narayan in weerarkaas uu ku dhintay 13 ruux sidoo kale waxa weerarka ku geeriyooday Cabdullah Cali Mire oo ahaa taliyaha guutada 7aad ururka 54aad waxa sidoo kale ku dhintay Cabdi maxamed Guutaale oo kamid ahaa Ciidamada la weeraray.
Dhinaca kale waxaa la la’yahay seeded ruux kuwaasi oo aan lagu Henin nolol ama geeri toona madama ay xili Habeen ay tahay
Ciidamada la weeraray dagaalka, dhaba loo galay,ayaa socdaalkoodii iska sii wateen, isla markaana waxa ay gaareen Saldhig ay ku leeyihiin Degaanka Warmaxan ee Gobolkaasi Shabeellaha Hoose .
Al-shabaabka weerarka soo qaaday ayaa la tilmaamay in ay ku socdeen ilaa iyo seeded gaari oo Soomalida u taqaano Homy ama caadiga.
Xalada ayaa hadda ah mid tagan waxana weerarkaasi sheegtay Al-Shabaab.
Maqaal horeQM oo boogaadisay Doorka Hogaamined ee M/Weynaha KGS
Maqaal XigaSAWIRRO:Kulan looga Hadlayay tayeynta waxbarasha oo Magaalada Beydhabo ka dhacay.